Farmaajo Oo Sheegay Inuu Soo Xiray Albaabkii u Dambeeyay Is-faham la'aanta Gobolka | SAHAN ONLINE
Farmaajo Oo Sheegay Inuu Soo Xiray Albaabkii u Dambeeyay Is-faham la’aanta Gobolka
MUQDISHO- khudbad uu u jeediyay xubnaha barlamaanka ee Federaalka ayuuu Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kaga warbixiyay dadaallada dowladnimada lagu xoojinayo ee dalka ka socda. Khudbadda Madaxweynuhu waxa ay taabanaysay dhinacyda amniga, siyaasadda arrimaha dibadda, dhaqaalaha, la dagaalanka kooxaha argagaxisada ah, cafinta daynta lagu leeyahay Soomaaliya iyo barnaamijka Is-xilqaan.
wuxuu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalku ay ku dhisan tahay is-ixtiraam, wax-wada-qabsi iyo tixgelinta madaxbannaanida dal walba. Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay in bilihii la soo dhaafay ay DFS ku mashquulsanayd xallinta isfaham darradii u dhexaysey dalalka Geeska Afrika, isaga oo tilmaamay in hadda loo gudbey marxalad khilaaf la’aan ah (Zero Conflict).
“Waxaa guul inoo ah inaynu bilihii na soo dhaafay aynu dadaal ku bixinnay ka qayb-qaadashada sidii loo dhammayn lahaa isfaham darradii ka dhex jirtay dalalka Gobolka Geeska Afrika. Waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyay ee isfaham la’aanta dalalka gobolka, waxaanna u gudbeynaa marxalad ku suntan khilaaf la’aan (Zero Conflict), iskaashi iyo wax-wada-qabsi.” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo
Madaxweyne Farmaajo waxaa uu magaalada Asmara kaga qaybgalay shir Saddex geesood ahaa ee wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Ereteriya ay 6-dii bishan magaalada Asmara, kaasi oo ay ku kala saxiixdeen heshiis Isfahan ah oo ku saabsan iskaashi dhaw oo dhexmara dalalkaas. Ka dib kulankii saddexda hoggaamiye, wasiirrada arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Ereteriya ayaa u duulay magaalada Djibouti, halkaas oo ay kula kulmeen Madaxweynaha Djibouti, si ay ugala xaajoodaan dadaallada lagu heshiisiinayo Ereteriya iyo Djbouti. Dadaalladan ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya ka qaadatay qayb weyn, si gobolka Geeska Afrika loogu soo dabbaalo nabad iyo xasilooni.